GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
AMAOKWU BAỊBỤL GA-ENYERE GỊ AKA: “Ònye ga-abụ ọbịa n’ụlọikwuu [Chineke]? . . . Ọ bụ onye na-eje ije n’ụzọ na-enweghị ntụpọ, onye na-eme ezi omume, onye na-ekwukwa eziokwu n’obi ya.”—Abụ Ọma 15:1, 2.
URU Ọ BARA: Ịkwụwa aka ọtọ na-amasị ọtụtụ ndị. Ma, gịnị ka ụfọdụ ndị na-eme ma ha chọpụta na o nweghị onye ga-ejide ha ma ha gwuo wayo ma ọ bụ were ihe na-abụghị nke ha? Ọ bụ ụdị ndị ha bụ n’eziokwu ga-ekpebi ihe ha ga-eme.
E nwere otu nwaanyị aha ya bụ Raquel. Ọrụ ya bụ ịzụrụ ụlọ ọrụ ha ihe. O kwuru, sị: “Ụfọdụ ndị na-ere ahịa gwara m na ọ bụrụ na m na-agba ha aka ahịa, ha ga na-enye m ego ha kwesịrị ịna-esepụrụ ụlọ ọrụ anyị. Ma, echetara m ihe Baịbụl kwuru gbasara ịkwụwa aka ọtọ ma gwa ha na achọghị m. Mgbe onye m na-arụrụ ọrụ nụrụ ihe a merenụ, ọ tụkwasịkwuru m obi.”
A sị na Raquel kwetara ihe a ha kwuru, ọ gaara enwe ego. Ma, gịnị ga-eme ma onye ọ na-arụrụ ọrụ chọpụta ihe merenụ? Ì chere na ọ gaghị achụ ya n’ọrụ? Onye ọzọ ọ̀ ga-ekwe iwe ya n’ọrụ ma ọ chọpụta na ọ naghị akwụwa aka ọtọ? Ihe ka ya mkpa bụ inwe aha ọma na ime ihe na-agaghị enye akọnuche ya nsogbu. Ilu 22:1 kwuru, sị: “Ọ dị mma ịhọrọ ezi aha karịa ịhọrọ akụ̀ dị ukwuu; amara dị mma karịa ọbụna ọlaọcha na ọlaedo.”
Onye Jessie na-arụrụ ọrụ tụkwasịrị ya obi n’ihi na ọ na-akwụwa aka ọtọ
Onye ọzọ na-akwụwa aka ọtọ bụ Jessie. Àgwà ọma ọ na-akpa mere ka onye ọ na-arụrụ ọrụ tụkwasị ya obi. Olee uru ọ baara ya? E buliri ya n’ọkwá, nyekwuo ya ohere ịna-eme ihe ụfọdụ ọ chọrọ. N’ihi ya, o nwekwuru oge ya na ndị ezinụlọ ya ga-eji na-anọrị, nwekwuokwa ohere ọ ga-eji na-eme ihe ndị gbasara ofufe Chineke.
Ndị ụfọdụ chọọ iwe ndị mmadụ n’ọrụ, ha na-aga chọwa ndị ha ma na ha na-akwụwa aka ọtọ. Dị ka ihe atụ, manịja otu ụlọ ọrụ dị na Filipinz degaara alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị n’obodo ahụ akwụkwọ ozi. O kwuru ka Ndịàmà Jehova tinye akwụkwọ ka o wee ha n’ọrụ. O kwuru, sị: “Ha na-arụsi ọrụ ike, na-akwụwa aka ọtọ, jirikwa obi ha niile na-arụ ọrụ.” Ọ bụ Jehova Chineke ka e kwesịrị ikele n’ihi na ọ bụ ya na-akụziri anyị ka anyị ‘kpọọ ihe ọjọọ asị, hụkwa ezi ihe n’anya.’—Emọs 5:15.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ịkwụwa Aka Ọtọ